ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ရေးဇန်နဝါရီ 2022 အကောင်းဆုံးပွဲစားကိုရှာပါ ကုန်သွယ်ရန်သင်ယူပါ
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ တွင် Scalping အတွက်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားဖြစ်သည်
ရေရှည်တွင် online Forex trading ၌အောင်မြင်ရန်သင်ကောင်းစွာသိသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ မဟာဗျူဟာ (၂) ခုအတူတူမရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်တာကသင့်အတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုပြောသည်နှင့်အတူ ဉီးခေါင်းရေ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးနေရာတွင်အသုံးအများဆုံးနည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုသည်တစ်နေ့တာလုံးမကြာခဏအလွန်သေးငယ်သောအကျိုးအမြတ်များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများမှအမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်ကုန်သည်သည်အနိမ့်ဆုံးစွန့်စားမှုများဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များသည် ၁ မိနစ်ဇယားများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီစျေးကွက်ကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ဤကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်၊ မသင့်ကိုသိလိုလျှင် - ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုသေချာဖတ်ပါ ဦး ရေပြားထရေးဒင်းကဘာလဲ? နင့်ကို ဦး စားပေးမည်သာမကနုသောအရာနှင့်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသာမကငါတို့မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများနှင့်လည်းဆွေးနွေးမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေမြှင့်တင်ခြင်း - ထိုကိစ္စအတွက်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုမဆိုသင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာစုံလင်ရန်လပေါင်းများစွာကြာသည်။
ဦး ခေါင်းခွံသည်အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်တစ်နေ့တာလုံးအမြတ်အစွန်းငယ်များကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကျော်ဖွင့်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာလွှဲကုန်သည်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အတော်များများတွင်ရာထူးများ၌ရှိနေကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ခြင်းသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် forex နေရာတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးအတွဲတွေ၊ အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ကြီးတွေ၊ နာရီအလွန်နည်းနည်းလေးရွေ့လျားနေလို့ပဲ။ ထို့အပြင်အဓိကငွေကြေးအတွဲများသည်အလွန်များပြားသောအရည်များ ဖြစ်၍ အလွန်များပြားသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာအတွက်၎င်းတို့ကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။
အခြေခံသဘောတရားအရ ဦး ရေပြားသည်အလွန်ပြင်းထန်သောစစ်မြေပြင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကသူတို့၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင်၏ ၁၀၀% ကိုအလားအလာရှိသောကုန်သွယ်မှုတွင်မြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာကုန်သည်သည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသို့လက်လှမ်းမီရန်နှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူကပြောသည် ဦး ရေပြားကိုအန risk တရာယ်နည်းသည်ဟုရှုမြင်လေ့ရှိသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆုံးရှုံးမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကုန်သည်များအနေဖြင့် stop-loss အမိန့်များကို install လုပ်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအရေးကြီးတယ်။ အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့သောအောင်မြင်သော ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုများစွာကိုသုတ်သင်ပစ်နိုင်သည်။
မြင့်မားသောငွေဖြစ်လွယ်မှုမှအကျိုးရှိသည့်အဓိက Forex အတွဲများနှင့်လိုက်ဖက်သည်
ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ငွေကြေးဆိုင်ရာအတွဲတစ်ခုတွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်
Scalping Trading သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
သင်ယခင်က ဦး ခေါင်းခွံရောင်းဝယ်မှုကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါကအခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းရန်သင့်အားဥပမာနှစ်နည်းပေးသင့်ပါသည်။
1 ဥပမာ ၁
သင်သည် GBP / USD ကိုသင်၏ ဦး ရေပြားနည်းဗျူဟာဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်၏စတင်လက်ကျန်ငွေသည်ပေါင် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပြီးသင်သြဇာမှရှောင်ကြဉ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
GBP / USD သည်လက်ရှိစျေးနှုန်း ၁.၃၁၀၄ တွင်ရှိသည်
ဇယားများကိုလေ့လာပြီးနောက် GBP သည်လာမည့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးလာနိုင်သည်ဟုသင်ထင်သည်
သငျသညျယူ။ အမြတ်အမိန့်မှာ 1.3169 မှာထား, သော 65 တိုးလာဖို့ပမာဏ pips သို့မဟုတ် ၇၀%
သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့ပါးစေရန် stop-loss အမိန့်ကိုလည်းချထားသည်။ ၁.၃၀၇၇ မှာ ၂၇ ဆုံးရှုံးမှုဒါမှမဟုတ် ၀.၂% ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
GBP / USD သည် ၁.၃၁၆၉ ထိဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ ဦး ရေပြားအနေအထားသည်အမြတ်အစွန်း (၀.၅%) သို့မဟုတ်ပေါင် (၅) တွင်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း, ဦး ရေပြားသည်သာအနည်းငယ်သာအကျိုးအမြတ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်ဥပမာနှစ်ခုတွင်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်လျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အမြတ်ငွေ ၀.၅% ရပြီးပေါင် ၅ ပေါင်ရှိလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းအလွန်နည်းပါးသောအမြတ်အစွန်းဟုထင်ရသော်လည်းကုန်သည်သည်အထက်ဖော်ပြပါဥပမာကိုတစ်နေ့တာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရာပေါင်းများစွာပင်ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုရန်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုမအောင်မြင်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်၎င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကို ၀.၂% သို့မဟုတ်ပေါင် ၂ အထိသာကန့်သတ်လိမ့်မည်။
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုသည်အလွန်သေးငယ်သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းအမြတ်အစွန်းကိုသာကြည့်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များအနေဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောလှုပ်ရှားမှုများကိုရှာဖွေရာ၌သြဇာကိုအသုံးချနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသောအရင်းအနှီးပမာဏကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲကုန်သည်အားသူတို့၏ ဦး ရေပြားအနေအထားပမာဏကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ဒီဥပမာမှာ၊ ကုန်သွယ်ရေးကိုသြဇာသက်ရောက်မှု ၁၀ ​​း ၁ ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်ကျဆင်းနေတဲ့ကုန်သွယ်မှုရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
EUR / USD ၏လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 1.1389 ဖြစ်ပါသည်
ကုန်သည်သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုမှ ၀.၃% အမြတ်ရရန်အမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့ရှိသောကြောင့်အမြတ်ယူရန်အမှာစာ ၁.၁၂၃၃ ကိုစီရင်သည်
၄ င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကို ၀.၁% သို့လျှော့ချရန် ၁.၁၃၇၇ ၏ stop-loss အမိန့်ကိုလည်းချထားသည်
ကုန်သည်သည်အစုရှယ်ယာပေါင် ၁၀၀၀ မှပေါင် ၁၀,၀၀၀ ကိုယူပြီး ၁၀: ၁ ကိုသြဇာသက်ရောက်သည်
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် EUR / USD သည်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းသို့ ၁.၁၄၂၃ သို့ရောက်ရှိသွားသည်နှင့်အမျှကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်သည်
အထက်ပါဥပမာအရ£ 0.3 ၏ ၀.၃% အမြတ်သည်ပေါင် ၃ ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကုန်သည်သည်ရာထူးနေရာတွင် ၁၀း၁ တွင်သြဇာသက်ရောက်ခဲ့ပြီးအမြတ်ငွေမှာပေါင် ၃၀ အထိရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုသည်အရှုံးဖြင့်ကုန်ဆုံးပါကဆုံးရှုံးမှုကိုပေါင် (၁၀) အထိကျလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ဦး ရေပြားကုန်သည်တစ် ဦး ချင်း၏အမြတ်အစွန်းသည်ပေါင် ၃၀ သို့မဟုတ်ပေါင် ၁၀ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်သည်ပင်ချိုးဖျက်နိုင်ရန်အတွက်သုံးခုလျှင်အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဤအချက်အထိဖတ်ပြီးပြီဆိုလျှင် ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်ရှိကြောင်းသင်သိလိမ့်မည် လွှဲကုန်သွယ်။ တကယ်တော့, ဦး ရေပြားအများကြီးပိုပြီးထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စနစ်တကျဖြစ်ပါသည်, အနည်းဆုံးရလဒ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုသာသူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ ဆန့်ကျင်တွင်, လွှဲကုန်သွယ်မကြာခဏ "စျေးကွက်တုံ့ပြန်ပုံကိုကြည့်ကြကုန်အံ့" ချဉ်းကပ်မှုကြာပါသည်။
ဤနေရာတွင် ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှု၏ထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးများအချို့ရှိပါသည်။
ကြီးထွားလာနေသောကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကျယ်ပြန့်သောအကျိုးကျေးဇူးများမှာတစ်ခုမှာသင်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးအစီအစဉ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် stop-loss order ၏ပုံစံဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထွက်ပေါက်ခလုတ်စျေးနှုန်းထက် ပို၍ ဘယ်သောအခါမျှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ Stop-loss order များသည်ဘယ်တော့မှ 100% fool-proof မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်မတည်ငြိမ်သောအခြေအနေများတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ သင်၌အာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသတ်မှတ်ရန်ရွေးစရာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သောအပိုဆောင်းကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သွယ်ရေးကိုအကျိုးအမြတ်မဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကဒါဇင်များစွာနေရာချဖို့လိုလိမ့်မယ် ရာပေါင်းများစွာသော တစ်နေ့လျှင်အရောင်းအများ၏။
မမေ့ပါနှင့်၊ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်ရရန်သာသင်သာရှာဖွေနေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တစ်နေ့တာလုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအမြတ်အစွန်းရအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ပြည့်ကုန်သွယ်လိုသူများအတွက် ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုစီကိုစုစည်းသောအခါ - ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်သည်မည်သည့်လမ်းတွင်မည်သည့်လမ်းကိုသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ၎င်းသည်နာရီသို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းကုန်သွယ်မှုကိုဆိုလိုသည်။
ဥပမာ GBP / USD အတွက်ပေါင်းစုကာလသည် ၁.၃၀၀၁ နှင့် ၁.၃၀၅၀ တို့၏ငွေကြေးအတွဲများကိုကုန်သွယ်မှုမြင်နိုင်သည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားမှအလွန်အမင်းအထောက်အကူအခြေအနေများတင်ပြသည်။
Trading အရောင်းအ ၀ ယ်အခွင့်အလမ်းအမြောက်အများ
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ခြင်းသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုမဆိုအသုံးချနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်စျေးကွက်များ ၂၄/၇ အရဆောင်ရွက်သောကြောင့်အဓိကကျသော Forex အတွဲများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အခါဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစွမ်းရည်သည်များသောအားဖြင့်ငွေများလွယ်ကူစွာရရှိခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်ကျပြီး၊
လောဘမကြာခဏတသမတ်တည်းအကျိုးအမြတ်အောင်ကုန်သည်များနှင့်ကြောင်းကုန်သည်တစ် ဦး အကြားခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ် မီးလောင်ဒဏ်ရာ အဓိပ်ပါယျမရှိသောရာထူးမှတဆင့်၎င်းတို့၏ bankroll ။ ဦး ခေါင်းခွံသည်အလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သော်လည်းတနေ့လုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိရောက်သော ဦး ရေပြားနည်းဗျူဟာသည်အမြဲတမ်းလိုအပ်သော stop-loss နှင့်အမြတ်ယူခြင်းအမိန့်များရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကုန်သည်သည်အဓိပ်ပါယျမရှိသောအရောင်းအ ၀ ယ်များမှရှောင်ရှားရန်သေချာစေသည်။
သင့်ရဲ့ ဦး ရေပြားကုန်သွယ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမစတင်မီသင်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားစရာများစွာရှိပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဘဏ်စာရင်းကိုမီးလောင်ရာလေပင့်မှကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
🥇သိကောင်းစရာ ၁ - ၁ မိနစ်ဇယားနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိပါ
ရိုးရာလွှဲကုန်သွယ်မှုနှင့်ထိတွေ့သူများသည် ၁ မိနစ်ဇယားများကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွှဲကုန်သည်တွေကရေရှည်ပုံကိုကြည့်ကြတာမို့ ၁ မိနစ်ဇယားကဒီကိစ္စမှာအသုံးမကျဘူး။
သို့သော် ၁ မိနစ်ဇယားသည်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသင့်အနေဖြင့်အလွန်သေးငယ်သောဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ဦး ရေပြားနည်းဗျူဟာကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးမီ ၁ မိနစ်ဇယားနှင့်အဆင်ပြေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
2 သိကောင်းစရာ ၂ - သီးသန့်ငွေချေးငှားရန်အဆင့်
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး ရုံ ဇယားတွေအကြောင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်အချို့သောငွေကြေး pair တစုံကို“ အမှန်ခြစ်” ဖြစ်စေသည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငွေကြေး pair တစုံတစ်နေ့တာအချို့အစိတ်အပိုင်းများစဉ်အတွင်းပိုပြီးမတည်ငြိမ်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားသလဲ ဒါမှမဟုတ်အချို့သောနေ့တွေမှာငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်းနည်းလေးရှိပါသလား။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ဤသည်မှာ ဦး ရေပြားကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အဓိကမက်ထရစ်များဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်, niching-down အနည်းငယ် Forex အတွဲများကိုစဉ်းစားရန်ကောင်းသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ရွေးချယ်ထားသည့်အတွဲအနည်းငယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်အသိပညာကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် - ကုန်သွယ်မှုများဆုံးရှုံးခြင်းထက်သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုအောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးပါ။
3 သိကောင်းစရာ ၃ - သင်၏အမြတ်နှင့်စွန့်စားမှု Parameters ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံး ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုမီသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပထမတစ်ခုမှာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအတွက်မည်မျှအမြတ်အစွန်းရရန်သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ ဦး ရေပြားသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှကင်းဝေးစေသည့်စနစ်တကျလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာစေရန်ဤပုံသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေသင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၀ န်ထမ်းရာခိုင်နှုန်း ၀.၂% ကိုရာထူးတစ်ခုစီသို့ပစ်မှတ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင်၏ ၀ ယ်ယူအမြတ်မှာယူမှုမှာဆက်လက်ရှိနေသင့်သည်။ အလားတူစွာသင်တစ် ဦး ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဆုံးရှုံးဖို့အဆင်သင့်ဆုံးအများဆုံးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမြတ်ယူမှုအမိန့်များကဲ့သို့သင်၏ stop-loss အမိန့်များသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသင့်သည်။
🥇သိကောင်းစရာ ၄ - အောင်မြင်ဖို့မင်းအမြင့်ဆုံးအချိုးလိုအပ်တယ်
သမားရိုးကျလွှဲကုန်သည်များသည်အနိုင်ရအချိုး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဖြင့်ရနိုင်ပြီးရေရှည်အကျိုးအမြတ်လည်းရနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်မအောင်မြင်သောရောင်းဝယ်မှုသုံးခုတွင် ၅% ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သော်လည်းလပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်ထားသောကုန်သွယ်မှုတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤဇိမ်ခံပစ္စည်းသည်ကုန်သည်များအဖို့အဆင်မပြေပါ။
ဆန့်ကျင်တွင်, သင် ဦး ရေပြားအောင်မြင်သောစေရန်မြင့်မားသောအနိုင်ရရှိအချိုးအစားပိုင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာအမြတ်ငွေယူမှုကို ၀.၆%၊ ၀ န်ဆောင်မှု ၀.၄% ကိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာကာလရှည်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက်အနည်းဆုံး ၆၆% အနိုင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၃ ခုအနက် ၂ ခုအနိုင်ရသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
5 သိကောင်းစရာ ၅ - အောင်မြင်ရန်အတွက်သြဇာကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ
လေ့လာသူများမှအသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုသြဇာသက်ရောက်ပါကကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းခြင်းသည်လုပ်ရကျိုးနပ်သည်ဟုအထင်လွဲမှားလေ့ရှိသည်။ သြဇာသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သော်လည်းသင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းအလားတူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့် ဦး ရေပြား၏ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆမှာသင်ရာပေါင်းများစွာသောကုန်သွယ်ရေးတွင်အမြတ်အစွန်းအနည်းငယ်ရလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အနိုင်ရရှိမှုအချိုးအစားမြင့်မားပါကသြဇာသက်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ငွေလက်ကျန်ပေါင် ၂၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်၏အမြတ်အစွန်းကို ၀.၂% သတ်မှတ်ထားပါကအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်ပေါင် ၂ ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်ကုန်သွယ်မှု ၁၀၀ ကိုနေရာချနိုင်ပြီး ၄ င်းတို့၏ ၇၅% သည်အောင်မြင်ခဲ့လျှင်သင့်လျော်သော ၀ င်ငွေရရှိလိမ့်မည် - တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုဘဏ်စာရင်းကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုအတွက် Forex ပွဲစားကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ဒါကြောင့်ယခုသင်သည်ကြီးထွားလာသောကုန်သွယ်မှု၏အဝင်များနှင့်အပြင်များကိုသိပြီးဖြစ်စဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိသောအခါယခုပွဲစားရွေးရန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲစားကိုရှာဖွေရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းသည် ဦး ရေပြားအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သေချာစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့် ဦး ဆုံးအချက်အနေဖြင့်ပွဲစားမှကောက်ခံသောပြန့်ပွားမှုအမျိုးအစားများကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်ဤသည်မှာ Forex pair တစုံ၏ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချမှုတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ GBP / USD ဖြင့် ၀ ယ်ယူသောစျေးနှုန်းမှာ ၁.၃၁၁၇ ဖြစ်သည်။ ရောင်းဈေးမှာ ၁.၃၁၀၂ ဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်းနှစ်ခုသည်3pips အကြားကွာခြားမှုကြောင့်သင်သည်အနည်းဆုံး pips ၃ ခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပိုကြီးလေ ပျံ့နှံ့စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်ပိုမိုလုပ်လေလေဒါကြောင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုဖြစ်စေသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်သင်သွားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဦး ရေပြားတွင်ပိုမိုသေးငယ်သည့်အကျိုးအမြတ်များကိုရရှိရန်သင်ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် ပိုမို၍ အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ ပွဲစားများကငွေပေးချေမှုများသည်သင်ရောင်းဝယ်မှုပုံစံပေါ် မူတည်၍ သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အတင်းကျပ်ဆုံးပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူလာလိမ့်မည် - ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များသည်နိမ့်ကျ။ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်မြင့်မားသည်။
ပြန့်ပွားမှု၏ထိပ်တွင်, သင်သည်လည်းကုန်သွယ်ကော်မရှင်နှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်သည်တစ်ရက်တာလုံးအကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်ရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားမှအသုံးပြုသောအခြေခံအခကြေးငွေကိုသင်စူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှု၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တရားစွဲဆိုထားသည် အရွယ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးနှစ် ဦး စလုံးကြီးစွန်းမှာတရားစွဲဆိုထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုပေါင် ၂၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ ပွဲစားက ၀.၁% ကောက်ခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်£ 2,000 ပေးရပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပေါင် ၂၂၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့်အမှာစာကိုရောင်းလျှင်ပေါင် ၂.၂၀ ပေးရမည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အနိမ့်ကျဆုံးသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်သင်သွားသင့်သည်။
မှတ်ချက် - အွန်လိုင်း Forex Space တွင်တက်ကြွသောပွဲစားများစွာသည်ကော်မရှင်နှင့်ကင်းလွတ်သောကုန်သွယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းသင်သတိကြီးစွာဖြင့်နင်းမိသည်။ အကြောင်းကတော့ပွဲစားတစ်ယောက်သည်ကော်မရှင်တစ်ခုချင်းစီကိုကောက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကိုအားသွင်းဖွယ်ရှိသည်။
တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်နိမ့်ကော်မရှင်များ ဦး ရေပြားများအတွက် forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရှာဖွေ - ထိုအမိန့်ကွပ်မျက်ဖြစ်စဉ်ကိုကဲ့သို့ရှာဖွေရန်အညီအမျှအရေးပါမက်ထရစ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏အမှာစာကိုနေရာချချိန်မှ စတင်၍ ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပွဲစားပွဲစားတစ် ဦး အတွက်ပုံမှန်အချိန်ယူရသောအချိန်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ ဦး ရေပြားအမိန့်ကို micro-စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ပွဲစားကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။ ၎င်းကသင်၏အမှာစာကိုလိုအပ်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကို ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများနှင့်ကိုက်ညီသည့်အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်နှင့်အတူထုတ်ဝေသည်။
ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုသည်အောင်မြင်ရန်အဆင့်မြင့်သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စျေးကွက်ဟာတစ်မိနစ်တစ်မိနစ်နီးပါးဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့သင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ၎င်းကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာဇယားဆွဲကိရိယာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသေချာစွာနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့မရှိရင်ဘယ်စျေးတွေသွားမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့သင့်မှာမရှိမဖြစ်ကိရိယာတွေမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ လူသိများသောညွှန်းကိန်းများစွာပေးထားသော Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင် Exponential Moving Averages, Bollinger Bands, Relative Strength Index နှင့် Fibonacci Retracement Levels တို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex ပွဲစား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်းအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးအနေဖြင့်ပွဲစားသည်လေးစားသောဘဏ္bodyာရေးအဖွဲ့ထံမှလိုင်စင်ယူထားသင့်သည်။ ဥပမာဗြိတိန်မှာအခြေစိုက်မယ်ဆိုရင် ပွဲစားကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအပြုအမူအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (FCA) မှလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Scalping 2021 အတွက်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစား
ဦး ခေါင်းခွံအတွက် Forex ပွဲစားကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အထက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်မရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါထိပ်တန်း ဦး စားပေးပွဲစားများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအစမှအဆုံးအထိဖတ်ပြီးပါပြီ၊ သင်သည်ယခုလက်ရှိကုန်သွယ်မှုသည်အဘယ်သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့် ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းကိုညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ရောက်အောင်သင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအခြေခံကျကျကျွန်ုပ်တို့ဖြိုဖျက်လိုက်ပြီ။ ၎င်းတွင် ၁ မိနစ်ဇယားများကိုဖတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးတစ်သမတ်တည်းရပ်တန့်ပြီးအရှုံးနှင့်အမြတ်ယူသောအမိန့်များကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အန္တရာယ်များကိုလျော့ချရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်ကုန်သွယ်ရေးတွင်အောင်မြင်ရန်အတွက်သင်အမြင့်ဆုံးအနိုင်ရရှိရန်အချိုးအစားလိုအပ်သည်ကိုသတိရရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့အမြတ်အစွန်းဟာအလွန်နည်းတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မူတည်နေလို့ပဲ။ သင်၏ ဦး ခေါင်းခွံအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်သည့်အခါမည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသည်။ နိမ့်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ၏ထိပ်တွင်, သင်တို့သည်လည်း microseconds မှာအမိန့်ကို execute အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ track- သောပွဲစားကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားကဘာလဲ?
ဦး ရေပြားသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 'ဦး ရေပြား' အလွန်သေးငယ်သောအကျိုးအမြတ်ကိုမြင်သည့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ ထိုအကျိုးအမြတ်များသည်ရာထူးတစ်ခုစီအတွက် pips အနည်းငယ်သာရှိတတ်သော်လည်းတစ်နေ့လျှင်ကုန်သွယ်မှု ၁၀၀ ကျော်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအမြတ်ငယ်များသည်တစ်နေ့တာလုံးအမြတ်အစွန်းများသောရောင်းဝယ်မှုများသို့ကူးပြောင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားကျသောအခါရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုအမိန့်များကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားသည့်အခါ stop-loss အမိန့်များအသုံးပြုမှုနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနည်းဗျူဟာသည်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အလွန်အန္တရာယ်နည်းသည့်နည်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦး ရေပြားရောင်းဝယ်ခြင်းသည်လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအနိုင်ရရန်လိုအပ်သည်။
Swing trading သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာ၊ ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာအတွက်ရာထူးတစ်ခုကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, လွှဲကုန်သည်များမိနစ်အနည်းငယ်ကျော်အဘို့အပွင့်လင်းရာထူးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားလာသောအခါငါအမြတ်အတွက်ဘယ်လောက်ပစ်မှတ်ထားသင့်သလဲ
သူ့မေးခွန်းအတွက်တစ် ဦး တည်းသောအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီသောအဖြေမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်သည်နှစ် ဦး ကအတူတူပဲ။ ကြည့်ရှုရန်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာသင်၏ရပ်နားမှုဆုံးရှုံးမှုအမိန့်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏အမြတ်အစွန်းပမာဏ၏ပမာဏဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဏ်စာရင်းကိုကာကွယ်ရန်ငွေလက်ကျန်ကိုသင်လိုအပ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားအတွက်အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားကဘာလဲ?
Forex သည်အထူးသဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကို ဦး စားပေးသည်။ အကြောင်းမှာအဓိကငွေကြေးအတွဲများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ မတည်ငြိမ်မှုနိမ့်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်များ ၂၄/၇ ကိုလည်ပတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားချသောအခါငါသြဇာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား?
သင့်လျော်သော ဦး ရေပြားပြုလုပ်ရန်အတွက်သြဇာသက်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သာအလွန်နိမ့်သောအကျိုးအမြတ်ကိုသာပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းတစ်နေ့လျှင်အောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များစွာကိုနေရာချနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ကုန်သွယ်မှု ဦး ရေပြားပေါ်ငါဘယ်လောက်စတင်သင့်သလဲ
သင်၌ကုန်သွယ်ရေး ဦး ရေပြားအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိပါကသင်၏လောင်းကြေးကိုပမာဏအနည်းငယ်မျှသာထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ သင်စလုပ်တုန်းကအမှားတွေလုပ်မိနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဦး ရေပြားနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်အထိအန္တရာယ်များလွန်းခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။